Gbanwee ọdịdị nke Grub na Oxygen Grub2 Okwu | Site na Linux
Gbanwee ọdịdị nke Grub na Oxygen Grub2 Theme
Ọ bụ ezie na mụ onwe m fọrọ nke nta ka ọ ghara ịgbanwe ihe ọ bụla na NriEnwere m mmasị na isiokwu a nke ukwuu, ma ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ KDE, Ga-achọ ya karịa m.
O di nwute na enweghị m ike ịnweta nseta ihuenyo Yabụ ị ga - ahụ etu o siri bụrụ, mana ahapụrụ m gị onyonyo onye edemede a na - enye anyị. Ọ bụ otu ihe ahụ, mana ọ nwere akara nke Debian. Nsonaazụ dị mma 😀
Ihu ọma ha niile nwere ime bụ ịgbada faịlụ a. Ozugbo ọ gbadara anyị, anyị na-emeghe ya, ma mepee ebe anyị na-etinye:
Akwụkwọ Nsọ ga-elekọta anyị maka ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ọdịdị / Nhazi » Gbanwee ọdịdị nke Grub na Oxygen Grub2 Theme
Haha, ọ dị mma na ụnyaahụ enweghị m ike imebi gị gburugburu ebe a, nri? haha m ga-abụ onye e mesoro ọnụ ala akparamaagwa haha.
Maazị elav etinye ihe na ụdị KDE, echere m na ị ga-agba ya foto.
Ọfọn, ka anyị hụ ma m teta ma wụnye ya
Nwoke, ihe oma aghaghi ikwenye. M na-agwa gị karịa, enweghị m ihe ọ bụla megide KDE, naanị ya nwere ihe abụọ na-anaghị amasị m:
- Ya elu oriri.
- Ọ bụghị ihe niile dị mfe dịka na Gnome.
Na mpụga nke a, ekwuru m mgbe niile na ọ bụ desktọọpụ GNU / Linux kachasị mma.
Pufff, m ji fedora 16 ndi oma m, ahuru m gi ihe dika onwa 1, ma taa ka m nwere mmasi igbanwe grub ma ahuru m na o nweghi akara fedora iji gbanwee ya, a ka nwere uzo ozo? ma ọ bụ ị ga-ahapụ nhọrọ m na-enweghị akara ngosi?
Grax na blog dị ezigbo mma, ha niile dị mma.
Kedu akara ngosi ị nwetara? Enwere ike igbanwe ihe gbanwere ...
Aga m ahụ otu esi etinye Grub2 na Arch, kama Grub1 nke bu nke m chere na m etinyela 😀
Damn m na-egbu oge, ọbụnadị n'ihi na ị na-agba ọsọ mijito ..
Onwere onye maara ka esi ewepu isiokwu a? Enweghị m mmasị na otu o si dị, ma e wezụga nke ahụ, achọpụtara m na ọ dị nwayọ ịgbada site na otu nhọrọ gaa na nke ọzọ
Aga m ahapụ otu okwu ahụ.
Zaghachi maka nkwụsịtụ
Ezi ọzọ. Ọfọn, "iwepụ" ọ bụghị kpọmkwem, mana achọpụtara m na idezi faịlụ ederede / wdg / ndabara / grub enwere akara nke kwuru "GRUB_THEME = / boot / grub / themes / Oxygen / theme.txt". Enwere m ya site na itinye #, dị ka nke a: "# GRUB_THEME = / boot / grub / themes / Oxygen / theme.txt"
na nke ahụ bụ ya, na isiokwu na-agbanyụọla.
PS: have ga-agba ọsọ melite-grub ma ọ bụ melite-grub2 maka mgbanwe ị ga - arụ.
Mmadụ Bịa ka anyị na saịtị 😀
Daalụ maka ego 😉… elav Ọ bụ ya wụnye nke a, ozugbo ọ mere ule ụfọdụ, ọ ga-ebipụta isiokwu ọzọ etu esi ewepụ ya
Ana m ekele gị nke ukwuu maka ihe niile.
Ekele m na anyị nwere olileanya ịga n'ihu na-agụ ebe a 🙂
daalụ! n'ikpeazụ, emeela m ya na ndị na-edozi ahụ nwekwara nhọrọ nke na-ekwu otu ihe ahụ, tọọ ya na voila 😀
WTF? Commodore 64 na Core i7 na Linux Mint
MGSE desktọọpụ ọhụrụ nke Linux Mint chọrọ